Global Voices teny Malagasy » Tetikasa “Exploring Taboos”, diaben’ny vehivavy an-tapitrisa · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 23 Avrily 2011 4:30 GMT 1	 · Mpanoratra Eddie Avila Nandika (fr) i Rayna St., Raveloaritiana Mamisoa
Sokajy: Ejipta, Fahalalahàna miteny, Fanoherana, Mediam-bahoaka, Vehivavy sy Miralenta, Zon'olombelona, Rising Voices
Noraiketin'ireo gazety malaza ary koa ny vaovao an'olo-tsotra  an-tantara ireo zava-niseho nandritra ny revolisiona Ejyptiana, ka nitodika tany amin'ny fampandrosoana izay niteraka ny fionganan'i Hosni Moubarak tamin'ny 11 febroary 2011 avokoa ny mason'izao tontolo izao. Niara nifarimbona ireo bilaogera na ireo mpira-miasa isan-karazany tamin'ny tetikasa Rising Voices tao Ejypta mba hilazalaza ny zava-niseho amin'ny alalan'ny zava-niainan'izy ireo manokana  .
Na dia izany aza anefa, iray volana taorian'ny fihetsiketseham-bahoaka manan-tantara, nitodika tany amin'ny fihetsiketseham-panoherana tany an-kafa  ny mason'ny ankamaroan'izao tontolo izao sy tamin'ny fiantraikan ‘ny loza voajanahary . Kanefa maro ireo bilaogera Ejyptiana nanohy nanoratra izay mety hiseho mandritra ity fotoanan'ny tetezamita ity.
Ejyptiana marobe no nanohy amin'ny fampiroboroboana ny zon'ny vehivavy ao Ejypta taorian'ny nialan'i Mubarak. Mpikambana ao amin'ny tetikasa Exploring Taboos  no nanoratra momba ny fandraisany anjara tamin'ny ( Diaben'ny vehivavy an-tapitrisa) izay natao ny 8 marsa 2011 izay nampisy fanoherana ny fihetsiketsehana  sy ny fanorisorenana avy amin'ireo nanohitra ny fitakiana  (horonantsary amin'ny teny arabo).
Nandray anjara teo anilan'ireo vehivavy tao amin'ny fihetsiketsehana i Ahmed Awadalla ao amin'ny bilaogy Rebel with a Cause . Namariparitra ny zava-niseho izy araka ny hevitry ny “lehilahy izay tonga tao mba hanohana ny fihetsiketsehan'ireo vehivavy ho amin'ny fahalalahana sy ny demokrasia “. Nandray anjara tamin'ny alalan'ny fizarana trakta mampiseho ny hetaheta, ary indrindra ny fandraisan'anjara miavaka an'ireo vehivavy amin'ny fandrafetana ny lalampanorenana, ny lalàna sy ny politika manaraka ho an'ny firenena ary koa ny fampanantenana amin'ny fitovian-jo tanteraka ho an'ny vehivavy izy. Niantso amin'ny fametrahana lalàna izay manameloka ny herisetra atao amin'ny vehivavy any an-trano na eny an-dalambé koa ny fihetsiketsehana. Nosoratany tao amin'io lahatsoratra  io ny fihetsaham-pon'ny sasany izay nahita ny tao anatin'ny traktra sy ny hetahetan'ireo mpanao fihetsiketsehana:
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2011/04/23/16575/
 vaovao an'olo-tsotra: https://fr.globalvoicesonline.org/dossiers/dossieregypte/
 zava-niainan'izy ireo manokana: https://rising.globalvoicesonline.org/blog/2011/03/07/egypt-looking-back-at-the-jan25-revolution/
 loza voajanahary: https://fr.globalvoicesonline.org/dossiers/tremblement-de-terre-au-japon-2011/
 fanoherana ny fihetsiketsehana: http://www.guardian.co.uk/world/2011/mar/08/rival-protesters-clash-women-tahrir
 fanorisorenana avy amin'ireo nanohitra ny fitakiana: http://www.youtube.com/watch?v=v9b-gKoX85c